वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व यौनशिक्षा | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व यौनशिक्षा
on: July 28, 2012 रोजगारी
यौनशिक्षा मानवजीवनका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् या स्वदेशमा बस्दा यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ । असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट शरीरमा घातक रोग लाग्न सक्ने भएकाले आप्रवासी कामदारहरूले यसका बारेमा विशेष जानकारी राख्नुपर्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा यौनाचारका बारेमा आवश्यक जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । नेपाली कामदारहरू यौनसम्बन्धी शिक्षा नलिईकन वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा विभिन्न यौनजन्य रोगको शिकार बनेर फर्कनुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमार्फत एचआईभी एड्सजस्ता डरलाग्दा यौनजन्य रोग भित्रने गरेको यूएन ओमनका क्षेत्रीय कार्यक्रम व्यवस्थापक सरु जोशी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अभ्यास थालेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘फर्किएका कतिपय कामदारले विभिन्न खालका डरलाग्दा यौनरोग लागेको बताउने गरेका छन् ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई घातक यौनरोगबाट बचाउने उद्देश्यले यसबारे जानकारी दिएर पठाउने गरिएको नेपाल अभिमुखीकरण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले बताए । ‘हामीले यौनरोगका बारेमा कामदारलाई आधा घण्टा पढाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यौन सम्पर्क गर्दा सर्न सक्ने रोग, त्यसबाट बच्ने उपाय र भविष्यमा त्यसले पार्ने असरका बारेमा जानकारी गराउने गरेका छौं ।’ कतिपय कामदार अभिमुखीकरण तालीम नै नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । तर, सम्बन्धित देशको संस्कृति, यौनाचार र यौनरोगका बारेमा जानकारी दिन तालीम अत्यावश्यक भएकोे उनी बताउँछन् । कामको खोजीमा रहेका कामदारले त्यस्ता रोगका बारेमा ठाउँठाउँमा गएर बुझ्न भ्याउँदैनन् । ‘तालीम दिँदा वैदेशिक रोजगारीमा गई यौन सम्पर्क नै गर्न हुन्न भन्ने गरेका छौं,’ उनले भने ‘कतिपय संस्थामा सुरक्षित यौनाचारका बारेमा पनि जानकारी दिइन्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वदेश तथा विदेश दुवै ठाउँमा यौन रोगका बारेमा शिक्षा दिने व्यवस्था भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङ बताउँछन् । नेपालमा रोजगारीमा पठाउने कम्पनीहरूले यसबारेमा तालीम दिन्छन् भने विदेश सम्बन्धित रोजगारदाताले नै दिने गरेका छन् । मलेशिया तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा जाने कामदारलाई यौनशिक्षाको बढी महŒव रहेको उनी बताउँछन् । ‘मलेशिया तथा यूएई यौन सम्पर्कका लागि खुला देश हो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता देशमा गएर हाम्रा कामदारले जथाभावी रूपमा यौन सम्पर्क गर्न सक्दछन् ।’ ती देशमा जाने कामदार स्वयम् नै यौनरोगका बारेमा बढी सजक हुनु पर्दछ । तर, साउदी अरब तथा कतारको रोजगारीमा गएर यौन सम्पर्क गर्ने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । आफ्ना कामदारलाई यौनरोग नलागोस् भन्ने उद्देश्यले प्रायजसो रोजगारदाताले समय÷समयमा स्वास्थ्य जाँच गर्ने र यौन सम्पर्कका लागि बाहिर जान बन्देज लगाउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय महिला कामदार गर्भवती भएर आउने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय त साथमा बच्चा नै लिएर आउने गरेका छन् । कसरी सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने ? यौन हिंसाबाट बच्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने ? भन्ने कुराको जानकारी नहुँदा त्यस्ता समस्या आइपरेको यूएन ओमनका श्रेष्ठ बताउँछिन् । नेपालबाट कम्तीमा २ वर्षका लागि कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । धेरैजसो कामदार आप्mना श्रीमान्÷श्रमती छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्छन् । लामो समयसम्म यौन सम्पर्क नगरी बस्दा उनीहरू मासिक रूपमा पागल हुन पुग्ने श्रेष्ठ बताउँछिन् । यसतर्फ रोजगारदाता र नेपालका सरोकारवाला निकायको ध्यान गएको छैन ।
कतिपय देशमा यौन सम्पर्कको लागि निश्चित स्थान नै छुट्ट्याइएको हुन्छ । त्यस्ता स्थानमा यौन आनन्द त लिन पाइन्छ । तर, सुरक्षाको बन्दोबस्त आफैले गर्नु पर्दछ । एकक्षणको आनन्दका लागि अमूल्य जीवनलाई जोखिममा पार्नु बुद्धिमानी होइन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गई यौनरोगबाट कसरी बच्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका बारेमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, यूनएन ओमन, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि काम गर्दै आएका छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाले पनि यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, बिडम्बना हालसम्म कुनै पनि संस्थासँग कति नेपाली कामदार यौनरोग लागेर फर्केका छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन ।